तेक्वान्दो नेतृत्व पूर्वाग्रही बन्यो « KhelkudNews.com
तेक्वान्दो नेतृत्व पूर्वाग्रही बन्यो
Published On :5September, 2014 6:07 pm
ध्रुब गुरुंग नेपाली तेक्वान्दोका पहिलो पुस्ताका प्रशिक्षक । बि.स २०३९ मा यस खेलमा लागेका गुरुंगका सुरुवाती प्रशिक्षक जेके सीन र दिपराज गुरुंग हुन् । तीन दशक अघि नै ब्ल्याकबेल्ट भएका ध्रुब संग गरिएको कुराकानीको सार संक्षेप
तपाइसंग पछिल्लो समय मागीएको स्पष्टीकरणको कारण के हो ?
मैले नेपाल तेक्वान्दो सघले आयोजना भएको मास्टर कोर्ष गुमाएको थिए । त्यसै कोर्ष गुमाएको कारण तेक्वन्दो युनियनले आयोजना गरेको कोर्षमा सहभागी भएको हु । एउटै प्रशिक्षकले लिने एउटा क्लास गुमे पछि अर्को क्लास लीएको हु । यसै कारण मलाई स्पष्टिकरण सोधीयो । मैले कसले आयोजना गरेको कोर्षमा सहभगिता जनाए भन्ने कुरा महत्वपूर्ण होइन । कुन कोर्ष गरे भन्ने हो । मैले कुकीवानको कोर्ष नै गरेको हु । फेरी यसै सस्थाले यो भन्दा अघि आयोजना गरेको कोर्ष गर्नेलाई केही नहुने मलाई मात्र स्पष्टिकरण सोधीनुले संघ नै पूर्वाग्रही देखिएको छ ।
तपाइ माथि नै किन पूर्वाग्रही भएको होला ?
त्यो त यसै भन्न सक्दिन । तर, पूर्वाग्रही भएको चाही प्रस्ट हो । संघका उपाध्यक्ष बेलायतमा तेक्वान्दोको कार्यक्रममा जानु हुन्छ, त्यो पनि संघको अनुमती नलिइ केही नहुने । अन्य ब्यक्ति युनियनकै कार्यक्रममा सरिक भए पनि केही नहुने , म चाही निसाना बन्ने । पूर्वाग्रहको नमुना भनेको झापाको साधारण सभामा पनि देखियो । सिनीयर कोचमा संघमा नहुने म र मिन थापा मात्र हौ । जबकी सिनीयर कोचमा सधै काम गर्ने पनि हामी नै हौ ।
संघको समस्या त सचिवालयदेखि नै देखियो नी होइन ?
हो । हामी तेक्वान्दो प्रशिक्षकले लाखौ रुपैया संघलाई ग्रेडिंगवापत बार्षीक रुपमा बुझाउने गर्छौ । त्यसैबाट संघका कार्यक्रम हुन्छन् । संघ चल्ने मुख्य आधार पनि त्यही हो । तर, सचिवालयको मुख्य जिम्मेवारी तेक्वान्दोका कुनै प्रशिक्षकलाई पत्याइएन । म संघलाई सोध्न चाहन्छु की हामी सबै तेक्वान्दो प्रशिक्षक यत्ति धेरै अयोग्य छौ ?
मनपरी तन्त्र बढ्यो । कार्यक्रम आयोजना गर्दा पनि भेदभाव छ । देशका लोकतन्त्र आए पनि तेक्वान्दो संघका राणाकालीन मनोबृत्ती नै छ । विगतमा गरेको योगदान सम्झनु पर्यो । हामी तेक्वान्दोमा समर्पीत हुन्छौ । तर, हाम्रो योग्यता बढाउन संघले खास केही गरेन । हामी आफैले गर्यौ । राखेपबाट पैसा आउछ, ग्रेडिंगवापत हामी बुझाउछौ । तर, सबै कोर्ष हामीले आफ्नै खर्चमा गर्नु ृपर्ने ? संघको काम चाही दण्डामात्र बर्षाउने ।